काठमाडौँ । सत्तारूढ नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष सतहमा आइरहेकै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच तीन दिनअघि बालुवाटारमा भएको भेटघाटलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न थालिएको छ । देउवा र ओलीबीच असार १७ गते राति बालुवाटारमा करिब डेढ घण्टा गोप्य छलफल …
ओलीले मन्त्रीहरुलाई बोलाएर भने- मलाई साथ नदिने जति छोडेर गए हुन्छ
काठमाडौं । आफूलाई हटाउन बहुमत अल्पमतको जोड घटाउ तीव्र भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार साँझ सबै मन्त्रीलाई बालुवाटार डाकेर सोधे, ‘तपाईंमध्ये को को मेरो नेतृत्वमा विश्वास गर्नुहुन्छ ? को को गर्नुहुन्न ? अहिल्यै जवाफ दिइरहनु पर्दैन। मैले सोधेको बेला भने हुन्छ । …
नेकपाभित्रको विवाद उत्तेजक बन्दै, राष्ट्रपतिलाई पनि विवादमा तानेर महाभियोग लगाउने चर्चा
काठमाडौं । नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्ष झन् उत्तेजक अवस्थामा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजनीतिक मात्र होइन, संवैधानिक शक्ति प्रयोग गर्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन् । ओलीको सन्देशले मिलनको सम्भावना कमजोर भएको अर्को पक्षको टिप्पणी छ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई भेटेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले साँझ ७ देखि सवा …
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठक स्थगन भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास वबालुवाटारमा जारी रहेको नेकपाको पाँचौँ बैठक यही असार २२ गते (आगामी सोमबार)सम्मका लागि स्थगन गरिएको नेकपाका प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठक मङ्गलबार …
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट निरन्तर धोका पाएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल गठबन्धनमा लागेका नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई फकाउन बालुवाटारले फेरि कोसिस गरेको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको बालुवाटार छलफलपछि महासचिव विष्णु पौडेलले गौतमलाई …
सिक्किमको संसदीय इतिहासमा सन् १९७४ मा लेण्डुप दोर्जेको पार्टी सिक्किम नेशनल पार्टी (एसएनसी )ले सिक्किमको संसदको कूल ३२ सीटमध्ये ३१ सीट जित्यो र १९७५ मा सिक्किमलाई गणतन्त्र बनाउँदै भारतमा विलय गरायो । त्यसको ५ वर्ष पछि १९७९ को सिक्किम विधानसभा चुनावमा उसको एसएनसी …
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाभित्र राजनीतिक खिचातानी चलिरहेको बेला सो पार्टीका अध्यक्षद्धय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार झण्डै चार घण्टा लामो वार्ता गरेका छन् । यति लामो वार्तामा पनि कुनै निकास निस्किन नसकेपछि शनिबार पनि पुनः वार्ता गर्नेगरी वार्ता स्थगित गरिएको छ …
बिष्णु पौडेलको जिकिर– केपी ओलीको राजीनामा पनि आउँदैन्, पार्टी कसैले फुटाउन पनि सक्दैन
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाका महासचिव बिष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा नदिने र नेकपालाई कसैले फुटाउन पनि नसक्ने जिकिर गरेका छन् । कान्तिपुर पत्रिकालाई दिएको अन्तरवार्तामा उनले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा गम्भीररुपमा नउठाइएको र केही नेताले अरु समस्या …